Marxuum Maxamed X. Ducaale oo si heer qaran ah loogu aasay Burco | Somaliland.Org
Marxuum Maxamed X. Ducaale oo si heer qaran ah loogu aasay Burco
April 29, 2008	Burco (Somaliland.org) – Waxa galabta si heer qaran ah loogu aasay magaalada Burco, Alle ha u naxariistee, Maxamed X. Ducaale Axmed oo ka mid ahaa odayaasha waaweyn ee reer Somaliland, gaar ahaan gobolka Sanaag.
Alle ha u naxariistee, Maxamed X. Ducaale, waxa uu ku geeryoodey magaalada Burco maanta, isaga oo 94 jir ahaa, waxaana aaskiisa ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan dowladda iyo golayaasha qaranka, madaxda xisbiyada mucaaridka ah, madax dhaqameedyo, odayaal iyo dadweyne aad u farabadan oo ka kala yimi gobolada dalka.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee KULMIYE, Axmed Maxamed Siilaanyo oo hoggaaminaya xubno door ah oo ka tirsan xisbiga ayaa ka qaybgalay aaska Marxuumka, isaga oo ka ambabaxay magaalada Hargeysa, kadib markii uu dhammaaday shirkii Golaha Dhexe ee xisbiga oo lagu qabtay Hotel Ambassador maanta.
Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE ayaa shirka ku wargeliyey geerida Marxuum Maxamed X. Ducaale oo uu sheegay inuu ahaa odey magac weyn ku leh gobolka Sanaag, wax badanna u soo qabtay dalka iyo dadka. Waxana uu uga tacsiyeeyey geerida Marxuumka dhammaan shacbiga Somaliland iyo qoyskii, eheladii iyo asxaabtii uu ka baxay, isaga oo Marxuumkana Illaahay uga baryey inuu naxariistii Janno ka waraabiyo.
Madaxweynaha Somaliland, Daahir Riyaale Kaahin ayaa isaguna tacsi u diray qoyskii uu ka baxay iyo shacbiga Somaliland guud ahaan, geerida ku timi Marxuum Maxamed X. Ducaale.